China roa ambin'ny folo ounse kapoaka taratasy fanary mpanamboatra sy mpamatsy | Chang Liang
Ny kaopy taratasy ampiasaina amin'ny fanafanana zava-pisotro dia rakotra plastika, mahatohitra ny mari-pana mihoatra ny 90 ℃, ary mety hamony rano mihitsy aza. Ny kaopy taratasy dia miavaka amin'ny fiarovana, fahasalamana, hazavana ary mety. Toerana ho an'ny daholobe, trano fisakafoanana, trano fisakafoanana dia azo ampiasaina, azo ampiasaina. Ny kaopy taratasy dia mizara ho kaopy sarimihetsika PE tokana ary kaopy sarimihetsika PE misy lafiny roa
● Single-sided PE sarimihetsika kaopy taratasy: ny taratasy kaopy vokarina amin'ny lafiny tokana PE sarimihetsika taratasy dia antsoina hoe tokana PE kaopy taratasy, ary ny fanehoana azy dia toy izao manaraka izao: ny sisin'ny taratasy kaopy misy rano dia malefaka PE sarimihetsika;
● Double-sided PE mifono taratasy kaopy: ny taratasy kaopy vokarina amin'ny lafiny roa PE mifono taratasy dia antsoina hoe roa sosona PE taratasy kaopy, ary ny teny hoe: ny taratasy kaopy misy PE mifono anatiny sy ivelany. Ankehitriny isika dia manana ny fiarovana ny tontolo iainana azo havaozina PLA sarimihetsika kaopy taratasy, fiarovana ny tontolo iainana sy degradable, aza manahy momba ny plastika olana.
● Haben'ny kaopy taratasy: Refesina amin'ny ounces (OZ) ny haben'ny kaopy taratasy. Ohatra, 9 ounces sy 12 ounces no mahazatra eny an-tsena.
Ny toetra mampiavaka ny vokatray
1. Ny kalitaon'ny hazavana, manohitra ny fahasimbana. Raha oharina amin'ny kaopy fitaratra dia maivana kokoa ny kaopy taratasy ary tsy atahorana ho vaky.
2. Vidiny ambany; Ny kalitaon'ny hazavana dia afaka mitahiry ny vidin'ny mivezivezy.
3. Fisehoana tsara vokany; Ny fanontam-pirinty haingon-trano dia mora tratrarina, vokatra tsara ho an'ny besinimaro, afaka mampiroborobo ny varotra.
4.Afaka ampiarahina amin'ny fitaovana isan-karazany, manatsara ny fiasan'ny fiarovana. Izy io sy ny aluminium foil, ny plastika ary ny fitaovana hafa dia afaka misoroka ny fahasimban'ny votoatin'ny kolikoly.
5. Fampisehoana tsara alokaloka, afaka mitazona tsara kokoa ny loko, ny hanitra, ny tsiron'ny atiny.
7. Afaka miara-miasa amin'ny milina famonosana mba hahazoana vokatra avo lenta sy haingam-pandeha sy fonosana.
7. Mora manokatra sy mamehy, mora manokatra sy mamerina.
8. Mora mitantana ny fako ary mora averina, afaka mitsitsy loharanon-karena.
9. Ny firongatry ny teknolojia vaovao sy ny dingana vaovao PLA kaopy taratasy, fiarovana ny tontolo iainana sy degradable, mampihena ny fahasimban'ny tontolo iainana. Ny tombony: kalitao tsara, vidiny mirary. Azafady, sokafy ny lalantsika mandresy.
teo aloha: Boaty sakafo antoandro miloko miloko azo ampiasaina
Manaraka: Lovia taratasy fanary manokana